Best 500kw Ilaa 800kw Matoor Qaylo Hooseeya Sale Badeecada Qalabka Buufiyeyaasha Ee Low
Koronto dhaliyaha Hoose 500kw ilaa 800kw oo awooda FMW runti waa weyne balaaran matoor naaftada aamusnaanta ku koray si weyn ku dhacay * stroke 6 dhululubo ah ama 8 iyo 12 dhululubooyin dhaliyaha dhaliyaha matoor. Waxaa loo diyaariyey warshad cabbir dhexdhexaad ah ama dhismo baaxad weyn sida suuqyada waaweyn, hoteelada, hoyga, tuulooyinka iyo wixii la mid ah dul. Iyagu haddaba waa kuwa ugu weyn daarad nooc matoor kaas oo laga samayn karaa go'yaal bir ah si daahir ah.
1. Silent Diesel Generator (500kw-800kw)
● Iyada oo leh koox cilmi baaris heer sare ah iyo koox horumarineed, kaliya maahan karaan warshadaha korantada ee FMW heer sare oo tayo leh oo la isku halleyn karo laakiin sidoo kale awoodda FMW ayaa naqshadeyn karta noocyo kala duwan oo ah gensets sida matoor weyn oo aamusan, rugta korantada weelka, matoor caqli leh sida ku xusan baahiyaha gaarka ah ee macmiilka.
● Goobta korantada madax-furashadu waa kala duwanyihiin (95-105)% Un
● Ka beddel culeyska 0-100%, Isugeynta / Xawaaraha Droop Ratio gudaha 5%.
matoor matoor hooseeya dhawaaqa degdega ah ee hooseeya matoorka dhaliyaha jabaqda hoose 500kw matoor aamus 800kw matoor hooseeya curiyaha aamusnaanta aamusnaan
Hore : 150kW ilaa 500kW Low Low Generator
Xiga : 800kw ilaa 1500kw matoor qaylo hooseeya
Mawduuca : 500kw ilaa 800kw matoor qaylo hooseeya